Bot ee qora Wiki Articles - Khabiirka Cirka
Waxaa laga yaabaa inaad u maleyneyso in qoraal 15,000 oo maqaalo maalin ah aysan ahayn mid dhab ah, laakiin waxaa suurtagal ah in Swede la yiraahdo Sverker Johansson. Ivan Konovalov, khabiirka Sare khabiir ayaa sheegaya in qofkani uu si guul leh u abuuray barnaamij kombuyuutar oo qori kara malaayiin maqaal. Wuxuu qoray qoraalo ka badan 2.7 milyan oo Wikipedia ah oo dunida oo dhan la yaabay shaqadiisa cajiibka ah. Sida laga soo xigtay wargayska Wall Street Journal, Johansson wuxuu noqday qoraaga ugu awooda badan adduunka, iyo tabarucdiisuna waxay ku qoreen 8 - registrar dominio sin hosting.5% articles Wikipedia.
Sidee bokhiyadu u qori karaan maqaalo tiro badan?
Sida laga soo xigtay Johansson, barkiiskiisa ayaa awood u leh inuu qoro boqolaal kun oo kun oo Wikipedia ah maalin kasta. Waa macalin saynis ah oo leh shahaadooyin heer sare ah ee injineernimada, luqadda, dhaqaalaha, iyo fisigaba. Johansson waxay u sheegtay Wall Street Journal in barkiis uu ka tirtiro macluumaadka khayraadka badan ee la isku halleyn karo oo walxaha wada dhigaya. Inta badan, barnaamijkan wuxuu daboolayaa maqaallo la xiriira canshuurta xayawaanka yar yar sida kuwa lamid ah iyo dhicin. Waxa kale oo ay awood u leedahay in ay qorto sheekooyinka magaalooyinka yar yar iyo tuulooyinka Filibiin.
Magaca Johansson's bot:
Abuurista Johansson waxaa lagu magacaabaa Lsjbot. Boostadaas gaarka ah waxaa hubaal ah inaan macnaheedu ahayn qoraallada indhaha aadanaha..Tusaale ahaan, Associated Press ayaa ku dhawaaqday in ay isticmaali doonto robots gaar ah si ay u qoraan boqollaal qaybood oo mawduucyo ah, iyo boggaga internetka ee kala duwan oo isticmaala bots si ay u qoraan mawduucyada wararka maalin kasta. Waxay inta badan daboolaan sheekooyinka la xiriira maaliyadda iyo ciyaaraha. Vikipediya, nus ka mid ah maqaallada oo dhan ayaa lagu hagaajiyaa gargaarka bots. Qaar ka mid ah tafaftirayaasha wakhti dheer ee Wikipedia ah kuma faraxsanyihiin sababtoo ah dadku kuma qoraan maqaalo kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, Johansson waxay difaacdaa barkada oo waxay tilmaameysaa in qoraallada ay qoreen ay yihiin kuwo sax ah iyo illaa iyo inta calaamad u ah.
Tusaale ahaan, Lsjbot waxay lahaayeen maqaallo qoraal ah oo ku saabsan magaalooyinka Basey, Philippines. Markii ay Tuulada Jasiira ku dhacday tuuladaas oo ay sababtay dhimasho, dad badan ayaa awooday inay soo booqdaan jeexjeexyada waxayna badbaadiyeen tiro badan oo dhibanayaal ah.
Sidee Lsjbot u shaqeysaa?
Malaayiin maqaalo ah Lsjbot waxay ku qoreen sax iyo barta. Botigu wuxu ururiyaa macluumaadka ilo kala duwan oo ka kooban macluumaadka qaabka ku haboon ee Wikipedia. Baaskiilku wuxuu abuuray in ka badan 454,000 maqaalo illaa iyo hadda, kalabadhana waxay ku jiraan luqadda iswidhishka. Bulshada Reer Iswiidhishka waxay barteen casharka ka soo horjeeda kala duwan ee ku saabsan maqaal-abuurka qoryaha, laakiin waxa uu ahaa mid xiiso badan oo ku saabsan Johansson's bot. Tifaftiraha Tikidhka ee Iswiidhishka ayaa dib u eegay qodobada, waxaana uu sheegay in Lsjbot uu shaqo fiican qabtay. Si kastaba ha ahaatee, uma uusan ogolaan barkan inuu qoro mawduucyo muran leh sida Lsjbot aysan awoodin inay dareemaan waxyaabo farsamo.
Dhibaatada Johanson's bot:
Dad badan ayaa cambaareeyay barta Johansson, oo ay ku jiraan Achim Raschka oo ka soo jeeda jarmalka. Wuxuu ka cabanayay qaabka jumlada oo wuxuu sheegay in Lsjbot aysan awood u lahayn in ay qoro maqaalo dheer. Boostarku wuxuu isticmaalaa xogaha kala duwan laakiin wuxuu ka tagaa ilo asal ah oo ka dambeeya markaad wax qoreyso. Dajinta dhaleeceynta ayaa ah in dhammaan bayaannada maqaalku aysan taageere tixraac sax ah. Waxay micnaheedu tahay in Lsjbot la filayay in lagu daro tixraacyo badan oo ku saabsan Wikipedia. Iyada oo bot bot ah, waxay noqoneysaa mid sahlan in la abuuro tiro badan oo maqaalo ah. Laakiin waxaan weli u baahanahay tifaftirayaal iyo qoraallo bini aadaminimo si ay u caawiyaan caddaynta waxyaabaha.